AKHRISO:-Sheekh Shariif oo Goor dhow Baaq Deg-deg ah soo saaray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Musharax Madaxweyne Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa baaq dg deg ah kasoo saaray xaaladda abaaraha ee Gobolka Gedo iyo Cudurka halista ah ee COVID-19.
Sheekh Shariif oo Qoraal boggiisa Facebook kusoo qoray ayaa marka hore Ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay inay qayb ka noqdaan gurmadka, kaalin muuqatana ay ku yeeshaan keenista dalka ee talaalka Covid-19.
Sidoo kale Sheekh Shariif ayaa Wasaaradaha Xukuumadda ay khuseyso xaaladdaha adeg ee dalka ka jira uu ugu horreeyo COVID-19 ka dalbaday inay ganacsatada u fududeeyaan sidii ay dalka u keeni lahaayeen, wax kasta oo looga hortegi karo cudurka Covid-19.
Beesha Caalamka ayuu Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ugu baaqay dhankooda kaalmo degdeg ah la gaaraan masiibada bini’aadannimo ee kajirta gobolka Gedo ee Jubaland iyo guud ahaan gobolada kale ee dalka.
Hoos ka Akhriso Qoraalka uu soo saaray Sheekh Shariif.